REMAX Active Noise Cancellation Headphone RB-600HB – SUNNY eSTORE
REMAX Active Noise Cancellation Headp...
REMAX Active Noise Cancellation Headphone RB-600HB
RemaxSKU: EP-REMA-BLA-255 (S004)
Black - 89,000 KsWhite - 89,000 Ks
Professional ဆူညံမှုလျှော့ချသည့်နည်းပညာ - ဆူညံသံများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ANC modules များအတွက် အထူးစီစဉ်ထားသော ဆူညံသံလျှော့ချပေးသည့် chips ၄ ခု ပါသည်။
နှစ်ခုအတွက် တစ်ခု - တစ်ချိန်တည်းမှာ ဖုန်းနှစ်လုံးနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရသည်။
HD microphone - အလွန်အာရုံခံကောင်းသည့် silicon wheat ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ကျယ်လောင်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် တွဲချိတ်ထားသော အနက်ရောင် wheat အဖော်များ။
အဆင့်မြှင့်ထားသည့် Subwoofer - အသံအတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့်နေရာတွင် လေစီးဆင်းနိုင်ရန်နှင့် bass အသံကို မြှင့်တင်ရန် နားများ၏အနေအထားကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးသည်။
ဦးခေါင်းတွင် တပ်ဆင်သည့် တန်းအကွေး၏ အလိုက်သင့်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည့်ဒီဇိုင်း - ဦးခေါင်း နှင့် အံကိုက်ဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ သက်တောင့်သက်သာဖြင့် ဝတ်ဆင်နိုင်သည့် ဒီဇိုင်းအကွေး။
အရည်အသွေးမြင့်သည့် နားကူရှင်များ သုံးထားသည် - တပ်ဆင်ထားသည့်အခါတွင် ဖိအားမျှနေရန်အတွက် protein leather နားကာများ အသုံးပြုထားပြီး နားကာခွက်ကလေးများ (ear pads) နှင့် ထိတွေ့ သည့်နေရာများတွင် ဖိအားပိုတိုးမြှင့်ပေးထားသောကြောင့် ပို၍တည်ငြိမ်စွာတပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။
တောက်လျှောက်သုံးဘက်ထရီသက်တမ်း - ၁၂နာရီ ကြာအောင် ပြောဆိုခြင်း သို့မဟုတ် သီချင်းပုဒ်ရေ ၂၀၀ အထိ တောက်လျှောက်နားထောင်ခြင်း၊ နေ့စဉ်နားထောင်ခြင်းနှင့် ဝေးလံသည့်ခရီးစဉ်၏လိုအပ်ချက်များ ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ခေါက်သိမ်းနိုင်သည့်ဒီဇိုင်း - လှည့်၍ခေါက်ပြီး၊ နားကာများကို ဘယ်နှင့်ညာသို့ လှည့်နိုင်ကာ၊ အပေါ်နှင့် အောက်သို့ ခေါက်သိမ်းနိုင်သည်။
Professional noise reduction technology:4noise reduction chips specially configured for ANC modules to cancel the noise.
One for two: Connect two phones at the same time. HD microphone: High-sensitivity silicon wheat, loud and clear, open black hanging wheat teammates.
Subwoofer upgrade: Enhancing the structure of the ears to make the sound more airflow inalarger space and enhance the bass sound.
Optimized design of the head beam curve: Curved design that fits of the head and comfortable to wear foralong time.
Using high-quality ear cushions: Use protein leather earmuffs to evenly distribute the wearing pressure, and achieve more stable wearing by increasing the contact area of the ear pads.
Continuous battery life: 12 hours of talk or continuous listening to 200 songs; can meet daily listening and long-distance travel needs.
Folding design: Rotate and fold, the earmuffs can be turned left and right, and folded up and down; it is more convenient to carry out when traveling or traveling.